Warbixin: Sidee maamulka gobolka Sh/Hoose ugu gurmaday fatahaadda Afgooye? | Najah Media Network
Bogga Hore Maqaalo Warbixin: Sidee maamulka gobolka Sh/Hoose ugu gurmaday fatahaadda Afgooye?
Warbixin: Sidee maamulka gobolka Sh/Hoose ugu gurmaday fatahaadda Afgooye?
Tan iyo markii uu webiga Shabelle ku fatahay degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran waxaa isa soo taraya xaaladaha bani’aadanimo ee ka jira halkaas, kuwaas oo ay sababeen daadadka ka dhashay fatahaadaha.
Kadib fatahaadda dad badan ayaa bilaabay inay isaga barakacaan guryahooda, kuwa kelena waxa ay ku go’doomeen xaafado ka tirsan degmada Afgooye.
Haddabda sidee maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ugu gurmaday fatahaadda Afgooye?
Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose, Mudane Ibrahim Aadan Ali (Najah) oo aan nasan habeen iyo maalin, kadib saameynta ka dhalatay fatahaadaasi ayaa u istaagay u gurmashada dadka shacabka ah ee ay dhibaatadu soo gaartay.
Ugu horreyn Najah oo horkacaya mas’uuliyiinta gobolka ayaa gurmadka ku bilaabay sidii biyo xir ama difaac loogu saameyn lahaa xaafadaha ay ka bilaabatay fatahaadda, wuxuuna dhigay jawaanno carro ah, si magaalada oo dhan aysan biyuhu ugu fidin, hayeeshee fatahaadda oo xooganeyd ayaa sababtay in magaalada ay daadadku wada-gaaraan, illaa xaafadaha qaar ay biyuhu go’doomiyeen.
Kadib maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa bilaabay sidii loo soo samata bixin lahaa dadka shacabka ah ee ay biyuhu hareereeyeen, si loo bad-baadiyo noloshooda, taas oo uu guddoomiye Najah iyo maamulkiisu ku guuleysteen.
Intaasi kadib maamulka ayaa bilaabay gargaar wejiyo kala duwan leh oo la gaarsiiyey shacabka, kaas oo illaa iyo haatan socda.
Wejiga koobaad ee gargaarka ayaa waxaa 25-jii bishii July loo qeybiyey illaa 1000 (kun qoys) oo ka mid ah qoysaskii ay saameysay fatahaadda webiga Shabelle.
Maalin kadib 26-kii July ayaa sidoo kale la qeybiyey wejiga 2-aad ee gargaarka, kaas isna la gaarsiiyey illaa 1000 qoys oo kale oo ay saameysay fatahaadda.
Kuma eka intaas dadaalka guddoomiyaha Shabeelaha Hoose ee fatahaadaha ku dhuftay gobolka, 6-bishan August wuxuu maamulku, iyada oo ay xaaladdu aad u adag tahay gurmad ballaaran gaarsiiyey 400 oo qoys oo ku dhaqan deegaanka Mareerey oo ka mid ah meelaha uu sida daran ugu fatahay webiga Shabelle.
Wuxuu sidoo kale maamulku 8 bishaan aynu ku ku jirno ee August gargaar kale uu geeyey deegaanada Sabiid iyo Caanoole, waxaana deeqdaas gargaarka ah loo qeybiyey illaa 600 oo qoys oo ku dhibaateysnaa deegaanadaasi.
11-kii bishan sidoo kale waxaa maamulka uu horkacyo Najah uu jawaanno badan oo loogu talagalay in biyaha looga xiro inay meelo kale ku sii fatahaan uu gaarsiiyey illaa 5000 oo qoys oo ku nool deegaanada Muuri, Adowdibille iyo Idimow.
Halka maamulka gobolka uu ku mashquulsanaa gargaarka dhinac kale kooxda Al-Shabaab ayaa waday hagar-daamadeeda, waxaana ciidamada dowladda ay toogasho ku dileen labo ka mid ah maleeshiyada kooxdaasi, kadib markii ay biyaha webiga si dhuumaaleysi ah ugu fasaxeen degmada Awdheegle, si loogu dhibaateeyo shacabka.
Weli fari kama qodna howlaha u gargaarida shacabka ee uu wado guddoomiye Najah waxaa todobaadkan isaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Amb. Cali Siciid iyo sidoo kale wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ah ee Soonaaliya ay kormeer indho-indheyn ah ku tegeen degmada Afgooye.
Ugu dambeyn shacabka ku dhaqan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa dhankooda haatan ka mahadcelinaya garab istaagga uu u muujiyey maamulka gobolka, iyaga oo sheegay in aysan ilaawi doonin marnaba, sida hagar la’aaneed ee uu ula qeybsaday dhibaatada, uguna gurmaday.
Maqaal horeRa’iisul Wasaaraha Japan oo is casilaya iyo sababta ka dambeysa
Maqaal XigaSawirro: Lafta Gareen oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka K/Galbeed